केटाकेटीमा झुट बोल्नेहरु पछि हुन्छन् टाठो र बुद्धिमान ! - Khabar Break | Khabar Break
केटाकेटीमा झुट बोल्नेहरु पछि हुन्छन् टाठो र बुद्धिमान !
बच्चाहरु आफ्नो गल्ती लुकाउन, नगरेको होमवर्क गरेको वा अह्राएको काम गरेको भन्ने लगायतका झुट बोल्दा यसले उनीहरुको बौद्धिक विकास हुने देखाएको हो ।
यसरी झुट बोल्ने बच्चाहरुमा आत्मविश्वास, बौल्ने क्षमता, मस्तिष्कको विकास, र अरुको मनसाय बुझ्ने लगायतका कुरामा विकाश हुने गर्दछ । तर झुट बोल्न जान्ने बच्चाहरुलाई ९ बर्षको उमेरपछि भने सत्य बोल्न सिकाउनु पर्ने अनुसन्धानमा देखाइएको छ ।
९ बर्षपछिको उमेरमा सिकेका अधिकाशं कुराहरु उनीहरुको मष्तिकमा लामो समय रहने र त्यसैलाई बानीको रुपमा परिणत गर्दछन् । तसर्थ ९ बर्षभन्दा कम उमेरमा बच्चाले झुटो बोले त्यसमा आपत्ती मानिहाल्नु पर्दैन । तर त्यसपछि भने बच्चालाई उच्च निगरानिमा राख्दै उसलाई साचो बोल्न सिकाउनु पर्छ ।
अझ कतिपय अवस्थामा बच्चाले झुट बोलेको जानेर पनि त्यसलाई मान्नु भने हुदैन । तर सानातिना झुट बोलेका छन् त्यसलाई ठुलो बिषय बनाउनु भने हुदैन ।
कोरोनामैत्री संसारकै सानो र अनौठो यो रेष्टुरेण्ट
८४ वर्षे ‘हट हजुरबा’, जो अझै युवतीसँगै र्‍याम्पमा हिँड्छन् !
काउकुती लगाउँदा किन हाँसो लाग्छ ? यस्तो छ कारण
यस्तो अचम्मको घर जुन सामाजिक संजनलमा भयो भाइरल
‘शुक्र ग्रहमा जीवन हुन सक्ने संकेत’